Ogaden News Agency (ONA) – Siyaasiga Somaliga waa midka ugu jaban caalamka Diyaarintiisa iyo Hawgalintiisa
Siyaasiga Somaliga waa midka ugu jaban caalamka Diyaarintiisa iyo Hawgalintiisa
Posted by ONA Admin	/ May 19, 2014
Itobiya waxay aaaminsan tahay inay nasiib u heshay siyaasi Somaliyeed oo hamigiisa uu yahay –Aniga iyo bahda aan ka dhashay -. Siyaasiga noocaa ahna waa midka ugu jaban diyaarintiisa iyo hawl-galintiisa. Waxaa ku filan oo kali ah in sheeda laga tuso midkii lagu badali lahaa oo diyaar ah haduu sida laga doonayo u dhaqmi waayo. Siyaasadda ay ku maamusho Itobiya Somaliya iyo Somalida waa midaa. In midkood ay meel kasoo qaado, ka dhigto siyaasi muuqda, isla markaana ay u abuurto qof ku haysta booska oo muujinaya inuu diyaar u yahay u adeega Itobiya hadii loo dhiibo booska uu hayo kidkaa. Waa goobadaa aan dhamaadka lahayn. Waa mid cusub oo jagada ay u dhiibtay iyo midka ag-fadhiya oy ku khuukhinayso in lagu badalayo haduu fulin waayo waxa laga doonayo. Laga bilaabo jagada M/weynaha, R/wasaaraha, wasaradaha, maamulada gobolada ilaa midka ugu hooseeya ee wax ka ah maamul Xukuumad/Gobol waxay isku daba fadhiyaan laba laba, inta badan kala reer ah, mararka qaarkoodna isku reer ah.
Hadafka Itobiya waa inay u hirgasho riyadii Minilik, hadafka Siyaasiga Somaliga ahee ay soo qabatana waa inuu helo mudada uu joogo halkaa malaayiin doolar kadibna isaga tago dalka ama dib ugu noqdo dalka uu haysto jinsiyadiisa. Waxba uma kala qarsoona labadooda oo midba midka kale wuu ogyahay rabitaakiisa wuxuuna ku dadaalayaa inuu u fuliyo, intaankanlagu fahmin khiyaanada kanna laga riixanin booska.
Gumaysiga Itobiya isla siyaasadaa ayuu damcay inuu u adeegsado ONLF. Dhowr jeer ayuuna abaabulay qaar u fuliya hawshaa, hasa ahaatee marwalba waxaa fashilinayay wacyiga siyaasiga ahee bulshadeena gude iyo dibadba, iyo isku duubnida xubnaha ururka. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa isku-daygii gumaysiga ay ku abuureen waxay ugu yeedheen Garabka Badbaadinta Jabhadda ama midkii Golaha sare, kuwaasoo soo saaray inay yihiin ONLF oo ku dambeeyay heshiiskii ay yidhaahdeen waxaa kala saxiixday Salaaxudiin iyo Shefero. Hadafka Itobiya wuxuu ahaa in sidaan soo sheegnay meel laga tuso madaxda iyo xubnaha ONLF inay jiraan kuwii lagu badali lahaa hadaanay soo xaroonin.
Itobiya waxay ku guulaysatay ilaa hadda inay heshiis la saxiixdo 11ban maamul oo leh waxaan nahay xukuumad (State) Somaliya ka dhisan oo ka madax banaan kuwa kale. Waa marka aan lagu darin Jabuuti iyo Kililka 5aad waliba. Waxaa halkaa ka muuqanaya inay Itobiya kasoo horjeedo wax la yidhaahdo Qaran Somaliyeed oo dib uga unkama Geeska Afrika. Waxaana dhici karta inuu qorshaha Itobiya yahay inay 50ka sano ee soos socota ka tirtirto astaamaha lagu yaqaano Somali ee ah Af, Diin, iyo Dhaqan. Iyo in Siyaasiyiinta Somaliya eel eh waxbaan u talinaa ay la mid yihiin dhagaxaanta ay shaxda ku dhigayso Itobiya. Tolow yaa u maqan dalkan iyo umadan.
Enagaa umaqane aynu fadhiga ka kacno walalka oo lita lama dhawre oo aan abaabulo dhalinyarada somaliyeef